Latest News & Update | Matrix Institute of Professionals
Professional Certificate in Trade Finance and Transaction Banking
Posted by Website Owner on April 23, 2019
Comments Off on Professional Certificate in Trade Finance and Transaction Banking
Professional Certificate in Trade Finance and Transaction Banking‼️‼️‼️ (CITF Exam Prep Course) မြန်မာနိုင်ငံ Banking Industries ရဲ့ အသက်သွေးကြောတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Trade Financing အပိုင်း ဒါမှမဟုတ် Business တွေရဲ့ Corporate တွေရဲ့ Trade Department မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုတဲ့ လူငယ်တွေ နဲ့ ပြည်တွင်ပြည်ပ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ထပ်မံ ချဲ့ ထွင်ချင်တဲ့ Professionals တွေအတွက် လုပ်ငန်း မှာ မရှိမဖြစ်သိထားသင့်တဲ့ Knowledge တွေကို ဖြည့်ပေးဖို့အတွက် “Trade Finance” နှင့် နောက်ပြီး နိုင်ငံတကာရဲ့ Trading
Posted by Website Owner on March 9, 2019
Comments Off on Financial Modelling Batch-2
Financial Modelling (Batch 2) 24th March 2019 မြန်မာနိုင်ငံ မှာ Matrix Institute of Professionals က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ Finance Professionals တိုင်းရဲ့ လက်ဆွဲ Financial Modelling Course ရဲ့ Batch2ကို မကြာခင်မှာ ထပ်မံဖွင့်လှစ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းလေးစားစွာဖြင့် သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်…. Financial Modelling နဲ့ ဘာလုပ်လို့ရလဲ ဆိုရင် It gives the ability to Finance & Investment Professionals to exercise and simulate the whole financial
Congratulations MYEA for organizingavery successful Entrepreneurship Summit!
Posted by nsadmin on July 25, 2018
Comments Off on Congratulations MYEA for organizingavery successful Entrepreneurship Summit!
MYEA အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပခဲ့တဲ့ Myanmar Entrepreneurship Summit 2017 ပွဲကြီးကို ၉၊၁၂၊၂၀၁၇ ရက်နေ့က နေပြည်တော် MICC2မှာ စည်ကားသိုက်မြိုက် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ လူ ၁,၀၀၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Summit မှာ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် အဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားကာ လူငယ် စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များကို လမ်းညွှန်အားပေး ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ပွဲမျိုးမှာ Matrix Institute of Professionals က တထောင့်တစ်နေရာမှ ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက် အတိုင်းမသိ ဂုဏ်ယူရပါတယ်။ Matrix ရဲ့  Booth
Matrix’s CFA Level I Exam Preparation Program – Individual Modules
Posted by nsadmin on July 24, 2018
Comments Off on Matrix’s CFA Level I Exam Preparation Program – Individual Modules
Course Code FN40201A Duration 30 Hours Level Course Description Matrix CFA Level I Exam Preparation Program provides candidates with the knowledge and skills necessary to prepare to take the CFA® Level I examinations. The program is fully aligned with the Chartered Financial Analyst (CFA) Body of Knowledge™ curriculum and covers
Matrix’s CFA Level I Exam Preparation Program
Comments Off on Matrix’s CFA Level I Exam Preparation Program
Course Code FN40201 Duration 252 Hours Level Advanced Course Description Matrix CFA Level I Exam Preparation Program provides candidates with the knowledge and skills necessary to prepare to take the CFA® Level I examinations. The program is fully aligned with the Chartered Financial Analyst (CFA) Body of Knowledge™ curriculum and